Calaamadaha Qaabiil & Haabiil - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Maqaalkii hore waxaan ku eegnay Calaamadihii Aadan iyo Xaawo. Waxay lahaayeen laba wiil oo si xoog badan iskaga hor yimid. Waa sheekadii dilkii ugu horeysay ee taariikhda aadanaha. Laakiin sidoo kale waxaan rabnaa in aan ka barano mabaadiida caalamiga ah ee sheekadan si aan u fahano calaamadahoodii. Sidaas daraaddeed aynu akhrino oo aan wax ka barano.(Halkan Riix si aad u furtid qaybtan bog kale).
Qaabiil iyo Haabiil: Laba wiil, Laba allabari
Tawreedka labadii wiil ee Aadan & Xaawo waxaa la odhan jiray Qaabiil iyo Haabiil. Quraanka laguma magacaabin jiritaankooda, laakiin waxaa loo yaqaanaa Qaabiil iyo Haabiil dhaqanka Islaamka. Waxay mid kasta keenee allabari Ilaah laakiin allabarigii kaliya ee Haabiil baa la aqbalay halka kii Qaabiil aannan. Masayr aawadiis Qaabiil wuxuu dilay walaalkiis laakiin ma uusan ka qarin karin ceebtii dambigiisa Ilaah. Su’aasha muhiimka ah ee xisaabtan waxaa weeye sababta allabarigii Haabiil loo aqbalay halka kii Qaabiilna aannan. Dad badan oo u qaatay in farqi labada walaalo u dhexeeya. Laakiin innagoo si taxadar leh u akhrinayna xisaabta dhexmartay waxay keeni doontaa in si kale aan u aragno. Tawreedka ayaa caddaynaya in uu jiray farqi u dhexeeya allabarigii keenay. Qaabiil wuxuu keenay ‘miraha ciidda’ (miraha iyo khudaarta) halka Haabiil uu ‘ka ahaa curadkii adhigiisa qaybaha baruurta’ ayuu keenay. Taas macnaheedu waxaa weeye in Haabiil uu ku allabaryi jiray xoolaha, sidii lax ama orgi, adhigiisa ka mid ah.
Halkan waxaan ku arki isku midka sidii calaamada Aadan. Aadan waxa uu isku dayay inuu ku daboolo cawradiisa laan caleen ah, laakiin waa loo baahan yahay hargo xayawaan(Oo sidaas u dhintay) in la siiyo dedid wax ku ool ah. Caleemuhu, miraha iyo khudaartu ma lahan dhiig oo sidaas ma ay laha nolol la mid ah tan dadka iyo xoolaha. Dedistii caleemihii aan dhiiga lahayn kuma filnayn Aadan iyo sidoo kale allabariga dhiig la’aanta ah ee miraha iyo khudaarta Qaabiil ma aysan ahayn mid la aqbali karo. Haabiil allabarigiisii ahaa ‘qaybaha baruurta’ macnaheeduna yahay in la daadshay dhiigga xoolaha oo la miiro, sida in xayawaanka asal ahaan dhar u noqday Aadan & Xaawo.
Waxaa laga yaabaa in aan ku soo koobi karno calaamad hadal aan bartay markii aan ahaa wiil yar: ‘Waddada lagu gaarayo cadaabta waxaa ku sharraxan niyad wanaagsan’. Hadalkaasi waxay u muuqataa in ay ku habboon tahay Qaabiil. Waxa uu rumeeyay Ilaah iyo isagoo muujiyey in tan soo socda in ay Isaga caabudaan iyagoo allabaryaaya. Laakiin Ilaah ma aqbalin allabariga oo sidaasna ma uusan aqbalin isaga. Laakiin waa maxay sababta? Ma wuxuu leeyahay dabeecad xun? Saas ma u odhanayso bilowgii. Waxa ay noqon kartaa in uu ku lahaa laga yaabaa xitaa in uu lahaa ujeedooyin wanaagsan iyo dabeecad sarre. Calaamadda Aadan, aabbihiis, ina siinayaa wax fikrad ah. Markii Ilaah xukumay Aadan iyo Xaawo wuxuu iyagii ka dhigay dad dhimanaya. Sidaas darteed dhimasho waxay noqotay bixinta dembigooda. Oo markaas Ilaah wuxuu iyagii siiyey calaamada – Dharka (hargo xayawaanka) in cawradooda la daboolay. Laakiin taa micnaheedu uu yahay in loogu tala galay in xoolaha su’aashu khuseeyso inuu dhinto. Xoolaha
dhintay iyo dhiigood la miiray si ay u daboosho ceebtii Aadan iyo Xaawo. Haddaba wiilashooda keenay allabaryo laakiin kan kaliya allabarigii Haabiil(‘Qaybaha baruurta adhigaaga’) wuxuu u baahan yahay geeri iyo in ay daadiyaan dheecaan iyo dhiigga allabariga. Tan ‘miraha ciidda’ ma dhiman karaan maadaama aysan ahayn ‘noole’ si la mid ah oo isaguna uusan dhiig u daadid karin.
Calaamadeenna: Qubidda & dareeraha ku shubma ee dhiigga
Ilaah baa halkan innagu baraya waano. Innaga innaguma xidha in aan go’aamino sida aan ugu dhawaanayno Ilaah. Wuxuu sameeyaa shuruucda, innaguna waxaan go’aaminaa in aan raacno ama aannan. Oo haddana shuruucdaa halkan waa in aan ku bixinaa allabarigii dhimanayey, daadisa oo qubidda dhiiggiisa. Waxaan laga yaabaa in aan jeclaan lahaa wax kasta oo looga baahan yahay oo kale, maxaa yeelay, ka dibna waxaan ku siin karaa khayraadka aniga ii gaar ah. Waxaan ku siin kartaa waqti, tamar, lacag, salaad iyo dadaal laakiin, laakiin nolol ma siin karno.
Laakiin allabari dhiig ah, waa tan waxa Ilaah u baahan yahay. Wax kasta oo kale ma noqon doono mid ku filan. Waxa ay noqon doontaa mid xiiso leh si aad u aragto in calaamadaha wax sii sheegid oo soo socota ay tillmaantan allabariga sii socoto.
Tags:Aadan iyo inaal kitab on Qaabiil iyo Haabiilcalaamada Haabiilcalaamada QaabiilCalaamadaha Qaabiil & Haabiilheybtaheybta iyo MeqaaMeqaaMeqaa iyo heybta ee IslaamkaQaabiil iyo Haabiil ee IslaamkaQaabiil iyo Haabiil IslaamkaQaabiil iyo Haabiil QuraankaQuraanka on Qaabiil iyo HaabiilTawreed on Qaabiil iyo Haabiilwaxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Qaabiil iyo Haabiilwaxa sameeya Tawreed yidhaahdo oo ku saabsan Qaabiil iyo Haabiilwiilashii Adamwiilashii Adam in islaamkawiilashii Adam nebiga